नयाँ सिमकार्ड लिनुभएको छ ? कल सेन्टरबाट फोन आउनसक्छ - Purwanchal Daily
१४ बैशाख २०७७, आईतवार १६:५५ मा प्रकाशित
के तपाईँ सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको समयअघि वा पछि आउनुभएको छ ? सो समयको आसपासमा तपाईँ देशभित्र आएर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नयाँ सिमकार्ड खरिद गर्नुभएको छ र सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ? यदि छ भने तपाईँलाई जुनसुकै बेला पनि नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेञ्जर गणमा रहेको कल सेन्टरबाट फोन आउन सक्छ ।
कोरोना भाइरसको सक्रमण भए÷नभएको पत्ता लगाउनसमेत कल सेन्टरबाट फोन गरेर आवश्यक जानकारी लिन थालिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सम्भावित बिरामीको पहिचान गर्न तथा उनीहरुको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि गत चैत २६ गतेदेखि कल सेन्टर स्थापना गरी काम भइरहेको छ ।
यस्तै नेपाल टेलिकमले कोरोना सङ्क्रमणबारे जानकारी दिन १४१९ मा डायल गरी सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिन सकिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले समेत सोही प्रकारको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको बेवपेज तथा मोबाइल एपमा समेत स्वास्थ्यस्थितिका बारेमा स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
Previous articleनेपालमा भेटियो ‘लहरे सर्प’को नयाँ प्रजाति
Next articleबन्दाबन्दी अन्त्यको दुई सातापछि एसइईको तयारी